ယူနီကုတ်ရော ဇော်ဂျီရော ကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်လိုသုံးမလဲ | နည်းပညာပျိုးခင်း
Homeယူနီကုတ်ရော ဇော်ဂျီရော ကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်လိုသုံးမလဲ
December 15, 2014 June 27, 2016 Phyo Lwin Unicode
ခုရက်ပိုင်း Google Translate မှာ မြန်မာစာကို ထောက်ပံ့ပေးထားတော့ လူတိုင်း အဲဒါကို စမ်းသုံးချင်ကြတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်တော့ အဆင်မပြေကြဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google က ယူနီကုတ်ဖောင့်ကိုပဲ သုံးပါတယ်။ အသုံးပြုသူတော်တော်များများက ဇော်ဂျီကို သုံးကြတယ်။ အဲတော့အဆင်မပြေဖြစ်ကုန်ရော။ အဲဒီတော့ Google Translate ကို သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယူနီကုတ်ကို မဖြစ်မနေသုံးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ကဲ ယူနီကုတ်ရော ဇော်ဂျီရော ကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်လိုသုံးကျမလဲ။
၂ ခုလုံးကို သုံးကြည့်သလောက်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ Windows764bits and Windows 8 64 bits မှာ သုံးကြည့်သလောက်တော့ အိုကေတယ်။
စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီး setup လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
ဟုတ်ပြီ။ ယူနီကုတ်မြင်ဖို့အတွက် ယူနီကုတ်ဖောင့်တစ်ခုခုကို အင်စတောလုပ်ထားဖို့လိုမယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သာလွန်ဖောင့်ကို သုံးထားတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဖောင့်ကို သုံးလို့ရပါတယ်။
သာလွန်ဖောင့်ကို https://code.google.com/p/tharlon-font/downloads/list ကနေဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင် စက်ထဲမှာ အင်စတောလုပ်လိုက်မယ်။
ဖောင့်အင်စတောလုပ်ပြီးရင်တော့ ဘယ် browser နဲ့ဘာကို သုံးမလဲဆိုတာကို ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး browser မှာ setting လုပ်ပါမယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဇော်ဂျီကို Mozilla Firefox နဲ့သုံးပြီး ယူနီကုတ်ကို Chrome နဲ့သုံးပါတယ်။
ယူနီကုတ်ကို Chrome နဲ့သုံးဖို့အတွက် Chrome ကို ဖွင့်ပြီး setting ကို သွားလိုက်ပါ။
Customize fonts ကို ကလစ်ပါ။
ဖောင့်အားလုံးကို Tharlon ကို ပြောင်းလိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင် Chrome မှာ ယူနီကုတ်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါပြီ။
http://my.wikipedia.org/ ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေပြေမြင်ရပါပြီ။
ဇော်ဂျီသုံးတဲ့သူတော်တော်များများ(ကျွန်တော်အပါအဝင်)က ယူနီကုတ်ကို ကောင်းမှန်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းမသုံးချင်ကြဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကီးဘုတ်လက်ကွက်တွေ မတူတဲ့အတွက် ယူနီကုတ်သုံးမယ်ဆိုရင် လက်ကွက်ပြန်ကျင့်ရမှာ ပျင်းလို့။ 😀
Developer Thant Thet Khin Zaw ကနေ keymagic ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးနဲ့ အဲဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းပေးထားပါတယ်။
https://code.google.com/p/keymagic/ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီကနေ KeyMagic-1.5.1-Installer.exe ကိုဒေါင်းပြီး အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ။
ဒါမမဟုတ်ရင် http://db.tt/Inqs6dqf ကနေလဲ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။
ဒီလင့်ထဲမှာ နောက်ထပ် ဇော်ဂျီကီးဘုတ်တစ်ခုလဲပါပါတယ်။
အဲဒီဆော့ဝဲလေးကို အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့ အောက်ကကီးဘုတ်တွေ ပါလာပါမယ်။
Zawgyi L – Unicode
ကျွန်တော်ကတော့ လက်ရှိ Zawgyi L – Unicode ဆိုတဲ့ ကီးဘုတ်ကိုပဲ သုံးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Myanmar3, Parabaik, myWin ကီးဘုတ်တွေကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီကီးဘုတ်တွေနဲ့ စာမရိုက်တက်လို့ပါ။ 😀
Zawgyi L – Unicode ကီးဘုတ်ကဘာလဲဆိုတော့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်းရိုက်ပြီး ယူနီကုတ်အတိုင်း ထွက်တဲ့ ကီးဘုတ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဇော်ဂျီက ယူနီကုတ်မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီတော့ ယူနီကုတ်သုံးဖို့အတွက် လက်ကွက်ပြန်ကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ကျွန်တော်ကတော့ နောက်ထပ် ကီးဘုတ်တစ်ခုကိုလဲ ထပ်ပြီးထည့်ထားပါတယ်။
အဲဒီကီးဘုတ်ကတော့ ဇော်ဂျီအတွက်ပါ။ အဲဒါကိုတော့ manual ထပ်ပြီးထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီဖိုင်ကတော့ စောစောက ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒေါင်းလုပ်လင့်က ဖိုင်ထဲမှာပါပါမယ်။
ပါလာတဲ့ကီးဘုတ်တွေကိုဖျက်ဖို့နဲ့နောက်ထပ်ကီးဘုတ်ထပ်ထည့်ဖို့အတွက် taskbar ပေါ်က i logo ပုံလေးကို Right Click လုပ်ပြီး Show Windows ကို ကလစ်လိုက်ပါ။
နောက်ထပ် windows တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်လိုအပ်သလိုပြင်ထားတဲ့ အခြေအနေပါ။
မကြိုက်တာတွေကို ဖျက်ပြီးနောက်ထပ်ဇော်ဂျီကီးဘုတ်ကို ထည့်ဖို့အတွက် Add ကို ကလစ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ထဲက Zawgyi L – Unicode.km2 ဖိုင်လေးကို ထည့်ပေးလိုက်ရင် ဇော်ဂျီရော ယူနီကုတ်ရောကို လက်ကွက်တစ်ခုထဲနဲ့ ရိုက်လို့ရပါပြီ။
Browser မှာ လဲ အဆင်ပြေပြေ သုံးလို့ရသွားပါပြီ။
စာဖတ်သူအတွက် အနည်းနဲ့အများအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်လျက်….
← SSH Login Banner ကို ဘယ်လို enable လုပ်မလဲ
How to bring back the Start Menu in Windows 8.1 / Windows 8? →
One thought on “ယူနီကုတ်ရော ဇော်ဂျီရော ကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်လိုသုံးမလဲ”
Unicode on screen keyboard from Google | နည်းပညာပျိုးခင်း says: